YAADDOO YAADDESSAA KAABBAA BAREEDAAN MARAME -
Qixxeessaa Lammii |Sadaasa 05, 2017
Jirmi abbaa mure, ilmi abbaa dhalche fakkaata. Garaan haadhaa babarruudha. Ilmaan abbaa fi haadha tokko irraa dhalatan dhiigaan tokko ta’anillee wanneen gara biraa hedduun gar gar ta’uu danda’an. Uumama waaqaan kenname dura dhaabbachuun mormuun waan hin danda’amneef fudhatanii keessummeessuun dirqama. Haadhaa abbaan ilmaan isaaniif dacheedha. Dacheen waan hin baatne ykn hin dandeenye hin qabdu. Dharaa dhugaa baattee jireessite. Haati ykn abbaan ilmaan isaa/isiin hama ykn hamtu jedhu hin jiru. jaamaan bakkalcha koo, naafaan dhaddacha koo, don’aan arjaa, laafaan jabaa, jallataan qajeelaa, bifa walii galaan hir’ina isaan qaban gara guutummaatti jijjiranii hamilee isaanii tikfataniif. Kun mala jiuu fi jireenya dhala namaa keessatti raawwatamu.
Ijoon barruu kiyyaa dhimmoota asii olitti kaasee ibse kana dura dhaabbachuuf osoo hin taane waan abbaan hin qabne irratti tuuluu irra dhugaa jiru ibsanii gara dhuugaa sana akka hirkifamu ykn harkifatu gochuun
irra filatamaadha jechuu barbaadeeti. Nama hirribatti jiru dammaqe jedhanni dhiisuun hirriba sana akka itti fufu taasisuudha. Abbaa fi haati ilmaan isaaniin waan isaan qaban itti himanii akka isaan gara irra goomu/wayyutti akka tarkaanfatan gochuun gaariidha. Buburina ilmaan isaanii qaban akka jirutti maxxanfatanii dhiisuu hin barbaachisu. Hamaa gara gaarii, laafaa, gara jabaa, jallataa gara qajeelaatti akka tarkaanfatu qajeelchuu barbaachisa.
Oromoon sirna gabrummaa jalatti ilmaan akaakuu ykn gosa hedduu horee jira. Ilmi hangafaa dhaaba gabrummaa jalaa isa baasuuf waggoota dheeraaf qabsoo hidhatnootti jiru ABO dha. Ilmi lammafaan ilma alagaan guddifachaa fudhatee alagaa harma hodhe OPDO dha. Ilmi sadaffaan ilma fayyaalessa mana jiru garuma itti tole gara gaggaluudha. Ilmaan sadanuu garuu Oromoo himatu. Dhimmi Oromoo nu galcha/nu ilaallata jedhu. Afaan Oromoo dubbachuu, dhimma Oromoo dubbachuu irratti garaa garummaa hin qaban. Haasawa irratti ilmaan sadi osoo hin taane ilma tokkicha fakkaatu. Hojiidhaan garuu ilmaan haadhaa fi abbaan tokkoo osoo hin taane dhala dhalachuu walii isaaniituu gonkumaa hin beekne ta’anii mul’atu. Garaan haadhaa buburre wanti jedhameef kana.
ABOn ilma Oromooti. OPDOn ilma TPLF. Ilmi fayyaalessi kanuma abbaa firoomfateeti. Garuu hojiidhaan wal irra walitti dhihaatu. ABOn ilma qara waan ta’eef obboleessa guddisaa irra obboleessa Fayyaalessa sana
dhiheeffata. Innis akkasuma obboleessa qara kana irra itti dhihaata. Ilmi guddisaa garuu isaan lachuu gidduu seenee gar gar dhiiba ykn harkisa. Oromoon garuu ilma alagaa harma hodhe ilma kiyyaa miti jedhee hin fanfansu waan ta’eef ilmaan taan irra caalatti ofitti qabee ykn aanfatee bara dheeraaf tajaajilaa jira. Ilmaan lamaaniif qabaan godhe garuu hammana jedhamee hin himamu.Turmaata keessa isaan sadanuu ilmaan horanii jiru. ABOn IFLO kale FIDO har’aa, IBSO, QC, ABOT, KWO fi ODF har’aa hore. Gariin isaanii akkuma dhalataniin waan du’aniif maqaan isaanii hin kaane. Warri lubbuun amma jiranis gain isaanii hanguma waan du’aniiti. Akkasuu ta’ee abbaa isaanii ABO fi ummata isaanii Oromos baay’ee hin kabajan. Akkasuma ofiillee badaa wal hin dhagahan. Afaaniin Oromoof qabsoofna jedhu jireenyi isaanii garuu gaaffii jala jira. Gariin fira irra nyaapha firoomfatanii nyaapha waliin garmaamaa jiru. Gariin taa’anii alaan’alu. Gariin abbaa isaanii ABO irratti olola ajiitii, komii fi jibbaa facaasu. Gosti ilmaan ABO kana fakkaata.
OPDOn TPLFiif ilmaan hedduu horte. Garuu ilmaan ABO jalaa ta’an. Abbummaan dhalchuu qofaan akka hin taane Rabbiin fuulaan isaan dhahee jira. Har’a ilmaan isaan horan cufti Ilmaan ABO ti. Gabaabatti ilmaan Oromoo bara mootummaa ceehumsaa 1991 as dhalatan marti hortee ABO ta’uu dhaaddannoon diina ibidda uffate afotti dirre bahatti bahanii ABOn nu haa bulchu! Abbaan biyyaa Oromoodha! Oromiyaan biyya teenna! Jedhanii sodaa tokko malee dhageessisan irra ragaan caalu hin jiru. Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromoo barbaadu jechuudha. ABOn hin jiru jedhamu isaan kana akka ta’e beekuu diduu hin barbaachisu. Dhalootni Oromoo achi dura dhalate kaan abdii kutate, kaan dina jala gale, kaan qabsotti jira. Haala wal dhahaa kana keessatti ilmaan TPLF harma hodhan OPDOn qabsoo ABOn dhiibee asiin gahee sadarkaa injifatnoon xumuramuu irra gahe kana kolaasuuf ykn dhidhima jeefa hin qabnetti gatuuf afaan haaraya akka malee gurra Oromootti mi’aawuun gadi bahanii jiru. Qabsoo sadarkaa murteessaa irra gahe kana karaa irraa butanii abbaa itti ta’anii bullukkoo gabrummaan maranii awwaaluuf jechoota mimi’aawoo qabsaawota ABOn lallabaa jiru. Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane waan dukkana keessa jiru. Oromoon kanaaf sirba amma OPDOn oowwe kana oowwisuufii hin qabu.
Bishaan yaa’u bisaan ciisu kaasa akkuma jedhame OPDO warraaqsi Qerroo Bilisummaa Oromoo dhiibee ciisaa kaase abbootii warraaqsa kanaa isii taasisuuf diqaalotni TPLFiif isaan dhalchan bakka cufaa jabaadhaa
fakkaadhaa ummata kana qabsoo kana harkatti qabaa ittiin jedhaa jiru. Kaabbaa bareedaa ABO uffatanii jechoota gurratti mi’aawan dhangalaasanii gurra ummata Oromoon yoo gahan ABO dhugaa sana fakkaatan. Galiin isaanii eessa akka ta’e kan beeku garuu isaanii fi TPLF duwwaadha. Dirretti bahanii qaanyii tokko malee afaan guutatanii ABOn nuhi malee ABOn biraa hin jiru sadarkaa jechuu itti danda’an irra gahanii jiru. ABOn garuu ni jira. Akeekaa fi kaayyoo haqaa inni harkaa qabu hojitti yoo hiikan waan isaan
dura dhaabbatu/danqu hin qabu. Hin beekan malee jiraachuu isaaniitiifuu ABOn wobii/gaachena guddaa tokko. Isa sodatu kabajaa isaanitti hore. Osoo inni jiraachuu baatee yoona isaanis hin jiran ture. Kana ummatni bal’aan Oromoo akka gaaritti beeka. Afaan bahee Oromoon abbaa biyyaati, ABOn nu haa bulchu jechuun guddaa xiqqaan, dhiiraa dhalaan hennaa dhaadatu akkanumaan dhaadhata itti fakkaate.
ABOn Oromoon fi OPDOnis gabrummaa TPLF jala jiratti beeka. Dhaabni gabrummaa jala jiru ummata gabrummaa jala jiru bilisoomsuuf dura dursee of bilisoomsuu qaba. Ofis sobuun ummatas sobuuf girdoo gabrummaa of duubatti qabatanii bu’aalee bubuutuu warraaqasa biyyoolessaatiin TPLF harkaa harcaate lafa irraa walitti funaananii ummata dura qaqabuun ittiin ummata sossobuuf yaaluun fudhatama waan hin qabneedha.
Gaaffiin Oromoo gaaffii barcuma OPDO ol hiiqsuu ykn oowwisuu osoo hin taane gaaffi abbaa biyyummaati. Gaaffii abbaa biyyummaa deebisuun aangawoota OPDO barcuma mootummaa federaalaa irrratti baasuu miti. Kun ifa ta’ee osoo jiruu qabsoo tana karaa irra dabarsuudhaaf qabsaawota haqaa fakkaatanii asii achi uttaaluun hin barbaachisu.Ummata biyyaa fi biyyee isaa irraa humna waraanaa TPLFn buqqifame bakka takkatti walitti tuulanii dhoortoo itti kadhachuun dhuguma ummata isaaniif yaaduu yoo ta’e dhuguma Oromoon of hin beekne jechuudha. Isin haa fixanii cal’isaa dhumaa jechuu akka ta’e beekkamuu qaba. Osoo ummatni buqqa’e lafaa fi lafee teenya barbaadna malee gargaarsa biraa hin barbaadnuu nu hidhachiisaa jedhanii dhimma qe’ee isaanii fi qabeenya isaaniitti of deebisuuf gaafataniif deebii cal’isaa taa’aa jedhu kennuuniif maal jechuudha?
Dhoortoon kadhatanii ummata kanaan sossoban gaafa dhumate ummata kana maal qabachuufiif tahan? laata? Dhaaba daangaa biyyattii seera mootummaan murtaa’eef karaa danda’amu maraan falmatee ummata isaaf deebisiisuu hin danda’initu gaaffii abbaa biyyummaa guddaa kana deebisiisuufii danda’a jedhanii abdachuun sangaa dhalaaf eeggachuudha. Ilmaan Oromoo alagaan mana isaa keessatti isa jalatti fixu, hidhu, ari’u, saamuu fi xiqqeessu ykn qaanessu ittisuu dhaaba hin dandeenye eeggachuun doofummaadha. ABOn bosona
muka Oromiyaa keessa bade jedhanii odeesan kunoo bosona mukaa qofa osoo hin taane bosona onnee ummata isaa keessaa bookkisaa jira. Har’a ilmaan isaan horanii ni qabna jedhanuu guututti ABO dha. ABOn bade jechuun ummatni Oromoo fi Oromiyaan badan jechuudha Horteen ABO maqaa gara garaan ala kana
keessatti bittinaawanii ummata isaaniif ni qabsoofna jedhanis dhuguma fiixaa ABO yoo ta’an har’a gulufa ilmaan guddifachaa TPLF kana dura dhaabbachuu qaban. Qurii ummata dura bu’ee qilee gubrummaattiitiin ceehu mormuu qabu. ABOn hin jiru jechuun isaanis hin jiran jechuudha. Kun ammoo ummata Oromoof furmaata hin ta’u. ABOn jiraachuun kaayyoon isaa jiraachuudha. Horteen isaa Qeerroon jiraachuudha. Dhugaa mul’ataa gadi ba’ee karaa irra taa’u dhagaadha jedhanii karaa irraa darbuuf itti duuluun ummata Oromoo dhugaa dhabsiisuuf duula bahe akka ta’e hubatamuu qaba.
Beektotni Oromoo dhuguma ummata isaaniif quuqama guddaa qaban hidda TPLF humna deebisee gadi jabeessuuf ceehu kana faarsuu ykn dhaahessuu irraa of qabuu qabu. Dooyii gara garaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiramu dhugoomfachuun uf gowwoomsuudha. Namoota meeshaa waraanaa itti hiraniin isin qabnaan bakka gara garaatti quba qabeenya isaaniitiin babbaafaman qabanii ykn qabsiisanii hennaa miidiyaa isaanii irratti gadi dhiisan fayyaaleyyii homaa hin beekne ykn hin hubatne biratti dhugaa qulqulluu ta’ee fudhatama. Seenaa mootummoota addunyaa keessatti waa hedduttu hojjatama. Ummataa fi ummata walitti buusuun, qabeenya mootummaa ofumaa gubanii qaamota biraa himatamaa taasisuu, qabeenya ummataa ofumaa gubanii qaama biraatti quba akeekuu fi kkf heddutu raawwatamuu dandama. Kanaaf, ummatni Oromoo ilmaan isaa afaan itti mi’aawee fi faaydaa bubuutuu warraaqsa ilmaan keetiin lafatti harcaate lafaa guuranii ija dura si qabaniin dogongorfamuun sirra hin jiraatu. Warraaqsa oowwe qabbaneessuun akka deebi’ee hin kaane gochuuf yeroo argatanii itti of qopheessuuf akka ta’e beekuu qaba. Ummata duratti nu abaaraa ummata nurraa qabbaneessaa hamma nuti sirritti itti of qopheessinuu jedhanii bobbaa iciitiin bobbaasan dhugaa seehuudhaan fudhachuun boolla gabrummaa irraa hamatti of awwaalchiisuuf of irratti diina gargaaruudha.
Ilmaan kee warra nafa Oromoo uffatanii dhiiga TPLFn hojjatanitu jiru. Isaan akkasii warra har’a si dhiichisiisanii boru sirratti dhiichisuuf jiraatan. Yaada, fedhii, akeeka, kaayyoo fi dhimma kee walii gala sirraa walitti qabatanii boru sirraan gara galuuf jiraataniidha. Goomoo ykn qolaa ilmaan TPLF keessa of galchitee lammata achii bahuun waan hin yaadamne akka ta’e amumma irraa beekuu qaba. Kanaaf yaaddoo yaaddessaa kaabbaa bareeddaan marame OPDO uffatee afaan ABOn dubbattu ummatni keenya dhugaa seehee akka qabsoo isaa bolla keessaa hin baane keessa irraa hin buufne akka qaroo ija isaatti eeggachuu qaba. Karaan qajeelaan, bal’aa fi dhugaa tokkichi karaa ABOn irra turee fi irra jiru qofa.